> Resource > iPhone > Kan sameeyey iPhone Ringtone: Samee iPhone Ringtone (iPhone 5 ka mid ah)
Wondershare Kan sameeyey iPhone Ringtone waa fiican gaare iPhone ringtone si aad ringtone gaar ah ka Cajalado kala duwan ama videos for iPhone / iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4G / iPhone 4GS / iPhone cusub 5, taas oo ka dhigaysa in aad si sahlan in la shakhsiyeeyo ringtones iPhone aad sida si ay baahiyahaaga gaarka ah.
1 Load video / files audio in this Kan sameeyey iPhone Ringtone
Free download iPhone Ringtone Kan sameeyey, rakibi iyo abuurtaan app this. Ka dib markii in, riix badhanka si ay u dajiyaan doonayo aad video ama audio files si ay u sameeyaan ringtones iPhone. Haddii kale, si toos ah jiidi files bartilmaameedka ka kombiyuutarka in barnaamijkan.
2 Set iPhone dhererka ringtone dooro qaab saarka M4R
Waxa aynnu og nahay, Apple iPhone isticmaalaa M4R files audio u ringtones iyo dhererka ringtone ma noqon kartaa in ka badan 30meeyo. Haddaba sidaas daraaddeed, waxaan u baahanahay in la gooyaa aad clips aan la rabin in dhererka gaar ah ka dibna loogu badalo in ay qaab M4R. Taasi waa sida.
Midig u guji mid ka mid ah files laga keeno ee Murayaad ee app this, ka dibna tag ah "Edit" doorasho. In ka-up pop "jar" window, aad jiidi karaan labada sliders u deji waqtiga bilowga iyo dhamaadka hoos bar horumarka ah, si aad u Laydinka soo karaa clip la jecel yahay. Ka dib markii in, guji icon maqas-sida oo guji "ok" si ay u xaqiijin. Markiiba, aad qayb doonayo in file waxaa loo qoran karaa Murayaad ee app this, aad.
Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad, furmo pop-up ah, waxaad dooran kartaa "M4R" qaab wax soo saarka hoos yaala qaybta ka ah "Qaabka"> "Audio".
3 Start iPhone ringtone qaadashada
In geeska midig ugu hooseysa tani Kan sameeyey iPhone Ringtone ah, waxaa jira badhan "Beddelaan". Just waxa ku dhacay si ay u bilaabaan iPhone ringtone qaadashada. Waxaad arki kartaa horumarka, u bar horumarka tilmaamaysa boqolleyda dhamaystirka iyo waqtiga soo hadhay.
Markii diinta ka ay ka badan tahay, waxaad u baahan tahay si ay u gudbiyaan wax soo saarka files M4R in aad iPhone si ay u dejiyaan ringtone. Fur files wax soo saarka, soo dhoofsadaan faylasha .m4r in Lugood, oo markaas iyaga u hagaagsan in iPhone (iPhone 5 taageeray). On aad iPhone, dooro keeno M4R files audio sida aad ringtone.
Features Key ee Wondershare Kan sameeyey iPhone Ringtone
Samee ringtone iPhone qofka ka video / files audio
Ka file kasta video / audio Samee iPhone M4R ringtone.
Samee dhowr ringtones iPhone waqti.
Samee iPhone si fudud ringtones, si deg deg ah, oo wax ku ool ah.
Jar iyagaa midkood ah ee video ama audio files si ay u sameeyaan iPhone ringtone.
Si fudud dhigay markii bilowgii iyo dhammaadka si sax ah Macdan aad clip doonayo in uu la kulmo iPhone ringtone dhererka xadka.